Ithegi: uphononongo lwe-cmo | Martech Zone
Maka: uphononongo lwe-cmo
Le infographic idibanisa ezinye iziphumo ezivela kwi-Accenture's CMO Insights ka-2014, kodwa ndiyoyika ukuba ivula ngesihloko esimangalisayo esichazwe gwenxa. Ithi: Iipesenti ezingama-78 zaBaphenduli bavuma ukuba ukuthengisa kulindeleke ukuba kwenziwe utshintsho olukhulu kule minyaka mihlanu izayo. Ngentlonelo, andivumelani. Ukuthengisa kuyavela kwaye idigital iphambili kwizicwangciso ezininzi. Uhlahlo-lwabiwo mali luyatshintsha, izicwangciso zentlalo kunye nomxholo zonyukile, kwaye izixhobo ziya zisiba ninzi
Amagosa aziNtloko okuthengisa (ii-CMOs) aya esanda ngokwaba izibonelelo kwimithombo yeendaba zentlalo, kodwa inani elothusayo aliboni ukubuya okubambekayo kolu tyalo-mali, ngokwe-CMO Survey. Kuphela liipesenti ezili-15 zee-CMO ezingama-410 ezivavanywe nguprofesa uChristine Moorman waseDuke University kwiSikolo soShishino abathi banobungqina bokuba nefuthe elininzi kwinkcitho yabo yokuthengisa kwimithombo yeendaba. Enye iipesenti ezingama-36 ziphendule ukuba zinoluvo lwempembelelo esemgangathweni, kodwa hayi
Lwesine, ngoFebruwari 28, 2013 Lwesine, ngoFebruwari 28, 2013 Douglas Karr
Eyasungulwa ngo-Agasti 2008, uPhononongo lwe-CMO lwenziwa kabini ngonyaka, kusetyenziswa uphando lwe-Intanethi, ukuqokelela nokusasaza izimvo zabathengisi abaphambili ukuze bakwazi ukuqikelela ikamva leemarike, ukulandelela ukugqwesa kwezentengiso, kunye nokuphucula ixabiso lentengiso kumashishini kunye uluntu. Lilonke, kubonakala ngathi uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa, kulindeleke ukuba lihle, uhlahlo-lwabiwo mali lwe-B2B kulindeleke ukuba lwehle, iimakethi zamanye amazwe azijongeka zilungile, ukuthengisa ngokwesiko kuyehla, kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa
UPhononongo lweCMO luqokelela kwaye lusasaze izimvo zabathengisi abaphambili ngenjongo yokuqikelela ikamva leemarike, ukulandelela ukugqwesa kwezentengiso, kunye nokuphucula ixabiso lentengiso kumashishini nakuluntu. Isilayidi esiphambili, esichazwe yiPilgrim yoThengiso, lulindelo kwinkcitho yeendaba zosasazo… ukukhula okungaguquguqukiyo kuxhaswa ngamandla kuphando. Eyasungulwa ngo-Agasti 2008, uPhando lweCMO lwenziwa kabini ngonyaka kusetyenziswa uphando lwe-Intanethi. Imibuzo iyaphinda ngokuhamba kwexesha